कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय मलाई पनि मन परेको छैन : शेखर कोइराला | mulkhabar.com
कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय मलाई पनि मन परेको छैन : शेखर कोइराला
February 2, 2018 | 8:44 am 194 Hits
पार्टी र सरकार भन्ने कुरा नैतिकतामा चल्छ । र, नैतिकता भनेको व्यक्तिमा निहित हुन्छ । कामचलाउ भइसकेको सरकारले गरेको निर्णयहरू मलाई पनि मन परेको छैन । असजिलो लागेको छ । जुन सोचले गरे पनि गरेको निर्णय दूरदर्शी छ, छैन सोच्नुपर्छ । देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन ख्याल गर्नुपर्छ । सबैले यस्तो गर्न थाले देशले कसरी धान्छ ? ज्येष्ठ नगारिकको उमेर घटाउने निर्णय गर्नुभन्दा ७७ वटै जिल्लामा अस्पतालसहितको ज्येष्ठ नागरिक आश्रम खोल्ने निर्णय गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला । प्रम देउवाजी मात्र होइन ओली, प्रचण्ड कसैले पनि हतारमा गलत निर्णय गर्न हुँदैन ।
हेर्नेस्, कांग्रेसलाई विधिअनुसार चलाउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टी सभापतिको आलोचना सुरु गरेका हौँ । र, मैले एकैचोटि राजीनामा माग्नु पनि विधिअनुसार हुँदैन र म राजीनामा माग्दिन पनि । हामी चाहन्छाैँ पार्टीले विधिलाई फलो गरोस् । यसैले त महासमितिको बैठक बोलाउन प्रेसर गरिरहेका छौँ । बैठकपछि अर्ली महाधिवेशन गरेर नयाँ लिडर छान्ने हो ।
त्यसो भए अर्ली महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवार को बन्छ ? तपाईं, शशांक कि सुजाता?
यही त आश्चर्य लाग्दो छ । यो भ्रमण समय सुहाउँदो र कूटनीतिक प्रक्रिया मिल्दो भएन भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, नयाँ सरकार बनिसकेको त छैन नि । यस्तो वेलामा विशेष दूतले कोसँग कुरा गर्ने ? संसारमा नयाँ सरकार बने पनि विशेष दूतको भ्रमण हुने गरेको छ । तर, हाम्रोमा चाहिँ बन्नुअगाडि नै भएको छ । यो किन र केका लागि भयो भन्ने कुराको चिरफार हुँदै जाला ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न दियौँ भने राष्ट्र टाट पल्टन्छ । किनभने हामी युएनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अनुबन्ध भइसकेका छौँ । देशमा आर्थिक, नैतिक संकट थपिन्छ । ‘मनी लन्डरिङ’ विश्वकै संस्था भइसकेको अवस्था छ । यसैले हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ । यसका आफ्नै नैतिक नीति र कानुन छन् । मलाई त अचम्म लाग्छ भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चित केपी ओलीजीले किन सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न एकपल्ट अवसर दिआँै भनेर बोल्नुभएको हो । उहाँले आफ्नो हैसियत ख्याल गर्नुपर्ने थियो । -नयाँ पत्रिकाबाट
तनहुँ , ५ फागुन प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा काङ्ग्रेसको भूमिका प्रभावकारी नभएको बताउँदै राष्ट्रिय…
यसो भन्दै फेरि रोक्यो कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ
काठमाडौं, २० माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि संसदीय सुनुवाइलाई रोकेको छ । कांग्रेस सांसदहरुले संवैधानिक आयोगमा गरिएको…
कांग्रेसद्वारा सदन अवरुद्ध, ‘नेपाल साम्यबादी ?’-रिजाल
कांग्रेसमा पार्टी सदस्यका लागि खुला आवेदन माग्ने बहस, के होला ?
विराटनगर पुगेर देउवाले भने-‘कोइराला परिवारसँग कुनै विवाद छैन’
कांग्रेस घर झगडा : नेविसंघले आज पनि धर्ना दिने, बैधानिकता आजबाट सकिँदै